Fil d'actualités du 19/03/2018
19/03/2018 - 16:00 : ZES: Tsy lany teny amin'ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna mikasika ny ZES (Zone Économique Spéciale) izay efa Nolavin'ny HCC ka nasian'ny governemanta fanovana. 40 ny solombavambahoaka nandany izany, ary 46 kosa no nitsipaka.
19/03/2018 - 15:30 : TAKAITRAN'NY RIVODOZA: Tafakatra 17 ny maty ary 15772 no tra-boina vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Eliakim, ka tany amin'ny faritra Atsinanana sy Avaratry ny nosy no tena lasibatra.
19/03/2018 - 14:30 : ANTSIRABE: Isehoana savorovoro ao amin'ny Tribonaly amin'izao fotoana izao noho ny tsy fankasitrahan'ny vahoaka maro ny fisamborana olona nahatrarana basy, voalaza fa natao hiarovan-tena amin'ny dahalo.
19/03/2018 - 14:00 : IEP MADAGASCAR: Hisy ny famelabelarana arahina ady hevitra mitondra ny lohahevitra hoe "Ny Toeran'ny hay-politika manoloana ny fifidianana" hiarahan'ity Ivon-toeram-pianarana momba ny politika ity sy ny fiarahamonim-pirenena eny amin'ny foibeny eny Ampandrana ny 23 martsa izao.
19/03/2018 - 13:30 : CLAUDINE RAZAIMAMONJY: Tokony rahampitso no hatao ny fanadihadiana an’I Claudine Razaimamonjy sy olona 4 hafa, noho ny resaka fanodinkodinana volar aha tsy misy ny fiovana.
19/03/2018 - 13:00 : FONJAN'ANTANIMORA: Tsy ny nisy ny fitondrana voafonja teny amin'ny fitsarana na ny fandraisana olona tokony haiditra am-ponja androany noho ny fitokonana fanairana nataon'ny mpandraharahan'ny fonja.
19/03/2018 - 12:30 : FANONDRANANA VEHIVAVY: Saron’ny mpitandro filaminana tao Ambanja ny faran’ny herinandro teo ny olona 3 mianadahy ao anaty tambajotra mpanondrana vehivavy. Vola hatrany amin’ny 1 300 000Ar no alain’izy ireo isaky ny vehivavy iray.
19/03/2018 - 12:00 : TSIMBAZAZA: Hahemotra ho amin'ny 3 ora tolakandro ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gzety saika hataon'ny Vondrona Parlemantera TIM, MAPAR, ary ny tsy miankina saika hatao ny tapakandro maraina teo.
19/03/2018 - 11:30 : ROSIA: Voafidy ho filoham-pirenena Rosianina faninefany i Vladimir Poutine. Salan'isa 76,67 % no azony nandritra ny fifidianana omaly, izay kianin'ny mpanohitra mafy.
19/03/2018 - 11:00 : AKON'NY RIVODOZA: Maro ireo lalam-pirenena tra-pahavoazana nandritra ny fandalovan’ny rivodoza Eliakim ny faran’ny herin’andro teo. Anisan’izany ny lalam-pirenena faha 2 (PK 176) akaikin’Ampasibe ; ny lalam-pirenena faha 5, manelanelana an’i Soanierana Ivongo sy Maroantsetra,...
Archive du 20170508
Korontana taorian�ny �kopikole� Olona 3 maty, 14 naratra
Olona 3 namoy ny ainy ary 14 hafa naratra tany Toliara ny zoma lasa teo, 10 minitra taorian�ny famaranana ny lalao � kopikole �,
Senatera Olga Ramalason Ilaina fankatoavana lal�na ny fampandrosoana firenena
Tranga iray mampiseho ny fahantran�ny mponina eto Madagasikara ny lafiny tsy fahampian-tsakafo.
Fitokanana paompin-drano tsy tontosa Tezitra Raojanarimampianina
Ny loharanon�i Mangarangarana no notarihina hamatsiana ny kaominina Tanambe. Fokotany dimy izay misy mponina 22 000 no heverina fa hisitraka io rano fisotro madio io.
Korontana eto amin�ny firenena Ny Franc ma�on no fositra, hoy i James Ratsima
Mikorontana tanteraka ny raharaham-pirenena ankehitriny, hoy ny filohan�ny antoko Asandratro ny fireneko, James Ratsima.
Fram ao Amparafaravola Mahatsiaro ataon�ny filoham-pirenena ankilabao
Voatery mikambana ny lisea sy ny CEG noho ny tsy fahampian�ny efitrano fianarana ao amin�ny kaominina Amparafaravola.
Kaominina Imerintsiatosika Miroso ny asa fampandrosoana na dia tsy misy manampy aza
Miroso ny asa fampandrosoana ny tan�na ho an�ny kaominina ambanivohitra Imerintsiatosika.
Pasitera Lanto Rabeharivelojaona �Mpitondra tena Kristianina no ilaintsika.�
Mitohy maneho ny heviny hatrany mikasika ny fahitany ny raharaham-pirenena, ny pasitera Lanto Rabeharivelojaona, mivondrona ao anatin�ireo mpanao politika mitaky ny hisian�ny fanorenana ifotony eto amin�ny firenena.
Hirefotra sa hitsefotra ?
Hirefotra sa hitsefotra ? Io indray no fanontanian�ny mpanara-baovao mikasika ny zava-misy eny amin�ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza amin�izao fotoana izao.
Taratasin�i Jean Farany vao manisy ventiny
Miarahaba anao Rahalahy Jean ! Mahafinaritra aloha rehefa manao ezaka e ! Fanontaniana manitikitika ihany ny ahy ity aloha ; firy isan-jatonay moa izao no mahatakatra sy mahita ary mahay mikirakira io sehatra asainareo hidiranay io ?
Banky Foiben�i Madagasikara Nampiakatra ho 9% ny �taux directeur�
Zava-misy mivantana iainan�ny fiaraha-monina ankehitriny ny fidangan�ny vidim-piainana vokatr�ity tsy fahamarinam-pototry ny Ariary ity eto Madagasikara, araka ny fanampim-panazavany.